I-LG K40s kunye ne-K50S: Uluhlu olutsha lwaphakathi kwebrendi lusemthethweni | Iindaba zeGajethi
U-Eder Esteban | | Iiselfowuni, Umnxeba
I-LG yenye yeempawu ezikhoyo kwi-IFA 2019 eBerlin. Kwimeko yayo yentshumayelo, umenzi waseKorea usishiyile ngeendlela ezintsha. Phakathi kwabo banikezele ngeefowuni zabo ezintsha eziphakathi. Ezi zii-LG K40 kunye ne-LG K50s, esele inentetho e-Asiya kwiveki ephelileyo, kodwa ngoku baziswa kwimakethi yaseYurophu ngale ntetho kwikomkhulu laseJamani.
Uluhlu lwaphakathi oluphakathi luhlaziywa ngezi fowuni zimbini. Ii-LG K40s kunye nee-K50s zijolise kumava emultimedia, ukusebenza ngcono kunye neekhamera ezifanelekileyo, ngokungathandabuzekiyo zizinto ezibalulekileyo kuludwe lwangoku oluphakathi kwintengiso.
Uyilo luye lwenziwa notshintsho ngokuthelekiswa neemodeli zorhwebo zangaphambili kweli candelo lentengiso. Babheje kule meko inotshi ekubunjweni kwethontsi lamanzi kuzo zombini izixhobo. Uyilo luyafana, nangona ziimodeli ezimbini ezahlukeneyo ngokweenkcukacha. Sithetha ngayo nganye nganye.
1 Ukucaciswa kwe-LG K40s kunye ne-LG K50s
Ukucaciswa kwe-LG K40s kunye ne-LG K50s
Ezi LG K40s kunye neeK50s bonisa inkqubela phambili yempawu yaseKorea kweli candelo kwimarike. Basishiya noyilo olutsha, kwaye siyabona ukuba ukubalulwa kwayo kubhetele kunezo zeefowuni zangaphambili ezivela kwinkampani ekule ndima. Inkqubela phambili icacile kwicandelo lokufota, kunye neekhamera ezingcono kule nkalo. Ukongeza, njengesiqhelo kuluhlu, bagcina isatifikethi somkhosi, esibonisa ukumelana kwabo. Oku kukucaciswa kwayo:
Imigca ye-LG K40S
Imigca ye-LG K50S
6,1 intshi ene-19.5: 9 ratio kunye HD + resolution 6,5 intshi ene-19.5: 9 ratio kunye HD + resolution
Iibhola ezisibhozo ze-2,0 GHz Iibhola ezisibhozo ze-2,0 GHz
I-32 GB (iyandiswa ngekhadi le-MicroSD) I-32 GB (iyandiswa ngekhadi le-MicroSD)
I-13 MP + 5 MP ye-engile ebanzi 13 MP + 5 MP engile ebanzi + 2 MP ubunzulu
I-Android 9 Pie I-Android 9 Pie
I-LTE, 4G. 3G, 2G, WiFi 802.11 a / c, GPS, GLONASS, SIM, USB I-LTE, 4G. 3G, 2G, WiFi 802.11 a / c, GPS, GLONASS, SIM, USB
I-DTS: X 3D Isandi esijikeleze umhlaba, ukhuseleko lwe-MIL-STD 810G, isivamvo seminwe esingasemva, Iqhosha loMncedisi kaGoogle I-DTS: X 3D Isandi esijikeleze umhlaba, ukhuseleko lwe-MIL-STD 810G, isivamvo seminwe esingasemva, Iqhosha loMncedisi kaGoogle
X x 156,3 73,9 8,6 mm X x 165,8 77,5 8,2 mm
I-LG K40s yeyona modeli ilula kule meko, ngaphandle kokuba yinto encinci kunenye. Ine-6,1-intshi yesikrini kule meko. Iza ngokudityaniswa kwe-RAM kunye nokugcinwa kwintengiso, apho unokukhetha khona. Ukongeza, inekhamera yangasemva ephindwe kabini ye-13 + 5 MP. Amandla ayo ebhetri e-3.500 mAh aya kusinika ukuzimela okuhle ngalo lonke ixesha xa kufuneka sisebenzise.
Kwelinye icala sifumana i-LG K50s, eyeyona modeli igqibeleleyo kolu luhlu. Uyilo lufana nenye imodeli, kuphela ukuba lukhulu kakhulu, zii-intshi ze-6.5 zesikrini kule meko. Esi sixhobo siza neekhamera ezintathu zangasemva, ezifanayo nezo ze-K40s, kuphela inzwa yesithathu eyongeziweyo, eyisixhobo sobunzulu. Ibhetri yayo inkulu kangako, inesakhono se-4.000 mAh kule meko.
Ngaphandle koko, iimodeli ezimbini zabelana ngezinye iinkcukacha. Zombini zinenzwa yeminwe engasemva, ukongeza ekubeni nayo iqhosha lokuvula uMncedisi kaGoogle, eyinto engatshintshiyo kwiifowuni ze-LG, ikwakhona kuluhlu oluphakathi. Ziimodeli ezinganyangekiyo, njengoko kubonisiwe ngokuba neMIL-STD 810G yoKhuselo ngokusemthethweni.
Kwingxelo yayo e-Asia kwiveki ephelileyo kwathiwa ulwazi oluthe kratya luya kutyhilwa malunga nokumiliselwa kwayo kwi-IFA 2019. Oku bekunjalo, nangona bekuyinxalenye. Kuba siyazi ukuba ezi modeli zintsha ze-LG ziphakathi izakwaziswa kwintengiso ngo-Okthobha, njengoko iqinisekisiwe yinkampani uqobo. Nangona kungekho mihla ithile inikiweyo ngo-Okthobha, kwaye asinalo nexabiso lokuthengisa kwezi zixhobo zimbini.
Iimodeli ezimbini ziya kuphehlelelwa ngemibala emibini kwintengiso, eyiyo INew Aurora emnyama kunye neBlue eNtsha yaseMoroccan. Kuya kufuneka silinde kancinci ukuze sifunde ngakumbi malunga nokusungulwa koluhlu oluphakathi kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-LG iveza uluhlu lwayo olutsha lwaphakathi kwi-IFA 2019
I-Asus ROG Strix G531, ilaptop yabona badlali, siyayihlalutya